Rapper Kanye West ကသူ့မိခင်-in ကို Kris Jenner နှင့်အတူရပါဘူး
ယနေ့သတင်းစာနာမည်ကြီးဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာနှင့်ရက်ပ် Kanye West ကသူ့မိခင်-in ကို Kris Jenner နှင့်အတူရတော်မမူကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကောလာဟလပဋိပက္ခ၏အကြောင်းရင်းသည်သူ၏ဇနီး Kim Kardashian ကဆန့်ကျင်သူတို့မိသားစုတစ်တာဝန်ခံမှုအရာနာမည်ကြီးတွေရဲ့မလျော်ကန်သောအပြုအမူ, ကြောင်းကြောင့်ရှိပါတယ်။ Jenner အပေါ်ဒီသဘောထားကြောင့်ခွင့်ပြုပါ, ထို့ကြောင့်အနောက်နိုင်ငံများနှင့်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်လို့မရပါဘူး။
Kim Kardashian, Kanye West, ခရစ် Jenner
အဆိုပါအတွင်းက Chris နှင့် Kanye အကြားဆက်ဆံရေးကပြောပါတယ်
ယနေ့နိုင်ငံခြားမီဒီယာ Kardashian မိသားစုနှင့်အတူအလွန်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ပြီးသူတစ်ဦးအချို့အတွင်း, နှင့်အင်တာဗျူးတွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အဆိုပါအရင်းအမြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေအဆက်မပြတ်အားဖြင့်သူ၏ဇနီးကင်, ဒါပေမယ့်သူမ၏ဆွေမျိုးများသာဖွစျပှားနအရှုပ်တော်ပုံစီစဉ်သူကဆိုသည်။ ဤတွင်စကားတို့ကိုဤအခါသမယအပေါ်ရက်ပ်နှင့်သူ့ဇနီး၏ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုပြုတတ်ကြ၏နေသောခေါင်းစဉ်:
"Kanye အဆက်မပြတ်သူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများတောင်းဆို evinces ဖြစ်ပါတယ်။ သူ၏ဇနီးတစ်နည်းနည်းနဲ့ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကထွက်မလာပါဘူး။ အဆိုပါရက်ပ်ကင်တစ်နည်းနည်းနဲ့ကသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါယုံကြည်ပါတယ်နှင့်အထွေထွေအခြေအနေမပေးပါဘူး။ သူ့ထံမှကျွန်မထပ်တလဲလဲသောသူသညျမိမိတစ်ဦးပါရမီနှငျ့ဘုရားသခငျစဉ်းစားစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ, ကံမကောင်း, အဘယ်သူမျှမအသိအမှတျပွု။ တန်ခိုးတော်အောက်မှာအများကြီးကြောင်း, ထိုသို့ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်နိုင်ပါတယ်အနောက်ယုံကြည်မှု။ Kanye madly သူ၏ဇနီးနှင့်အတူမေတ္တာ၌, ဒါပေမယ့်သူမဖွင့်သူမ၏အကွံဉာဏျကဲ့သို့တောက်ပသည်ထင်မထားဘူး။ "
"သူ၏သမီး၏မိသားစုတွင်ဤအရှုပ်တော်ပုံအားလုံးအကဲခတ်, သူမ၏ကာကွယ်ရေးမှ mom, Kris Jenner တယ်။ သူမသည်ရက်ပ်ကင်ကိုရည်ညွှန်းသည်လမ်းကိုမကြိုက်ကြဘူး, သူသူမ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ ခရစ် Kanye သူမ၏နှင့်သူ၏သမီးပိုပြီးလေးစားမှုဖြစ်သင့်ကြောင်းယုံကြည်သည်။ ဒါဟာ Kim ကအနောက်ညှဉျးဆဲအဖြစ်မျှသိသာအကြောင်းပြချက်နှင့်အတူပြုလုပ်ကြည့်ဖို့နှိပ်စက်တာ။ ခရစ်အဆက်မပြတ်အရှင်ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေမိပေမယ့်သူမ၏သည်းခံခြင်းထွက်အပြေးသည်, ဆက်ဆံရေးသမီးနှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းအတွက်စွက်ဖက်ဖို့ကြိုးစားနေသည်။ သူမသည်တကယ်တော့သူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုအလွန် ချစ်. ဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးကွာဟမှုရှိလျှင်, သူ၏သမီးမှသူကအရမ်းနာကျင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထင်၏, Kanye နှင့်ကင်မ်နှင့် ပတ်သက်. အလွန်စိုးရိမ်နေကြသည်။ "
Kris Jenner နှင့် Kanye West
ဒါကရဲသောမျက်နှာ: ချာ၏ရုပ်ပုံများကိုကူးယူဖမ်းမိ Kim Kardashian က9ကြိမ်!
Kim Kardashian ကအဆိုပါ CFDA ဖက်ရှင်ထံမှဂုဏ်သတင်းဆု၏ပထမဦးဆုံးစဉ်ဆုရှင်ဖြစ်လိမ့်မည်
archive ကိုပုံများ, နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနှင့်ချစ်ခြင်း၏ထိထိမိမိကြေငြာ: မိသားစု Kardashian အတွက်မိခင်ရဲ့နေ့
အဆိုပါ Kardashian အဘိဓါန် West မိသားစုအကြောင်းကိုဇာတ်လမ်း၏အဆုံးမှာရက်ပ်၏ဤထူးဆန်းတဲ့အပြုအမူများအတွက်အကြောင်းပြချက်များ၏အရင်းအမြစ်အားပြောပြရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်:
တကယ့်စေချင်တာလေးမျိုး - "ဟာ Kanye နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေသောသူများသည်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်။ အဆိုပါရက်ပ်အပန်းဖြေလိုသောမဟုတ်, 24 နာရီတစ်ရက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ သူကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကခဲ့ဒါကြောင့်တစ်ကြာရှည်စိတ်ကျရောဂါအတွက်ရလဒ်တစ်ခုအာရုံကြောချို့ယွင်း, ပါပဲ။ တစ်ခုခုတစ်ကြိမ်နှင့်ဤအထပ်ထပ်ကဲ့သို့အလွန်ကြောက်လန့်ကအနောက်၏ဖြစ်ပျက်နိုင်ပါသည်။ "
Hugh Jackman - လိင်တူချစ်သူ?
ဘား Rafaeli ခြောက်လပထမဦးဆုံးကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်ကိုယ်ဝန်ဖြစ်ပါသည်
ဆမ် Worthington Lara Bingle နှင့်မကြာမီဒုတိယကလေးမွေးဖွားခံရဖို့
Meghan Markle တော်ဝင်မိသားစုနှင့်အတူခရစ္စမတ်ဝန်ဆောင်မှုမှာ "ပုံမှန်"
Rumer Willis ရှည်လျားမပျော်ခဲ့သောအရာကိုပြောပြတစ်ဦးကိုပြောင်းရွှေ့အက်ဆေးရေးသားခဲ့သည်
ဘရူနိုမားစ်ဂြိုဟ်တွေရဲ့ privacy ထံမှသတင်း
ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက် Iwan Rheon
Tyra ဘဏ်များက "ငါ့ကလေး" တွင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပြောင်းလဲသွားပြီ
Kim Kardashian ကဖော်ပြ cheekbones အဘို့အသွားများဖယ်ရှားပေးနှင့် Slim တစ်သားမွေးအင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်
ကုရုနှင့် Hemsworth လျှို့ဝှက်စွာသြစတြေးလျအတွက်လက်ထပ်?
Miranda Kerr အနေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလက်စွပ်ပြသ
ငရုတ်ကောင်းနှင့်အတူ squash caviar
ကင်နှင့် convection နှင့်အတူမိုက်ခရိုဝေ့
ဘန်အက်ဖလက်နှင့် Lindsey Shukus အများပြည်သူ၌ထငျရှား
သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ - ခွဲစိတ်ပြီးနောက်ဟောကိန်း
ရင်သားကင်ဆာ Pad တက်ဘလက်များသည်
Bukovel နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း, Carpathian
နွေဦးရာသီ, 2014 ပုံရိပ်
အံသွား alignment ကို